Were BLG Mind were nnukwu ihe ịma aka - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Nchịkọta ego na ihe omume > Were BLG Mind were ihe ịma aka dị oke egwu
Youchọrọ ịkwanyekwu onwe gị mgbe ị na-enyere BLG Mind aka imeziwanye ndụ ndị na-adịghị ike na Bromley, Lewisham na Greenwich? Tinye onwe gị n’ule ahụ na Ultra Challenge, ma kwụghachi gị ụgwọ site n’inwe mmetụta dị ukwuu nke mmezu ka ị na-agafe akara ngwụcha.
Ihe ịma aka ọ bụla ị họọrọ, ị ga-enweta nkwado zuru oke ka ị nwee ike ịtọ ebumnuche ọhụrụ, nwee ọmarịcha n'èzí Britain, wee kwaba onwe gị n'ihu n'ọkwa dị elu, na-akpali akpali.
Ntinye gị ga-agụnye nri na ihe ọṅụṅụ n'efu na nkwụsị izu ike mgbe niile, gbakwunyere nkwado gụnyere ndị dọkịta, ndị ọkachamara na ịhịa aka n'ahụ. Ka ị na-agafe akara njedebe, ị ga-enweta otu iko fizz, T-shirt, na nrite iji cheta ihe ị rụpụtara.
Họrọ n'ime otu n'ime ihe ịma aka dị n'okpuru, wee rụọ ọrụ maka BLG Mind!
Ihe ịma aka South Coast, 3-4 Septemba 2022
Jee ije, gbaa ọsọ ma ọ bụ gbaa ihe ruru 100km site na Eastbourne ruo Arundel. Were ihe ịma aka zuru oke na Beachy Head, n'elu ọmarịcha ụmụnna nwanyị asaa, yana n'okporo ụzọ South Downs a ma ama site na Brighton wee ruo Arundel; ma ọ bụ họrọ ọkara ịma aka ma ọ bụ 25km nkeji ịma aka ịma aka.
Maka nkọwa zuru ezu nke ọnụahịa yana ịbanye, gaa na: South Coast Ultra ịma aka
Nsogbu Thames Path, 10-11 Septemba 2022
Gaa ije, gbaa ọsọ ma ọ bụ gbaa ọsọ n'ụzọ Thames Challenge, na-eso nnukwu osimiri England. Ihe ịma aka ụzọ Thames zuru ezu 100km na-esi na Putney Bridge gafere Hampton Court ruo Runnymede, wee gaa na ọmarịcha ọmarịcha akụkọ ihe mere eme gara aga ruo Henley. Site na nhọrọ nke ọkara na nkeji nkeji, enwere ihe ịma aka nye onye ọ bụla.
Maka nkọwa zuru ezu nke ọnụahịa yana ịbanye, gaa na: Thames Path Ultra Challenge
Thames Bridges Trek, Septemba 10, 2022
Soro ndị njem 2,000 na-agbagharị n'ofe isi obodo wee nweta echiche na-enweghị atụ nke mbara igwe site na ebe kacha mma. Site na akwa akwa Putney, ọ dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ chere Obodo, zig-zagging n'elu ọtụtụ àkwà mmiri akụkọ ihe mere eme, gụnyere nnukwu ụlọ elu Tower, nke ọ bụla nwere akụkọ na-adọrọ mmasị nke ya.
Maka nkọwa zuru ezu nke ọnụahịa yana ịbanye, gaa na: Thames Bridges Trek
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ma ọ bụ enyemaka ọ bụla na Ultra Challenge, biko nye ndị otu anyị na-anakọta ego oku na 020 3328 0365, email. fundraising@blgmind.org.uk ma ọ bụ pịa bọtịnụ dị n'okpuru.
Nweta mmụọ nsọ site n'ịchịkọta ego ndị ọzọ